सूर्य थापा भन्छन्, ‘भीम रावललाई मानसिक समस्या भएको हो की ?’ « Kakharaa
सूर्य थापा भन्छन्, ‘भीम रावललाई मानसिक समस्या भएको हो की ?’
२९ पुस, काठमाडौं । पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका दुई नेताहरु एकआपसमा सामाजिक सञ्जालमा वादविवाद गर्न थालेका छन् । स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार एवं केन्द्रीय समिति सदस्य सूर्य थापाबीच सामाजिक सञ्जालमा वादविवादको दोहोरी चलिरहेको छ । वादविवादकै क्रमम केहीदिन अघि नेता भीम रावलले आफूलाई बालुवाटारमा बस्ने व्यक्तिबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको अभिव्यक्ति दिए । पछिल्लो केही समयदेखि रावल र थापाको सामाजिक सञ्जालमा देखिएको वादविवादपछि धेरैको शंका सूर्य थापामा गयो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भएको हिसावले थापा प्रायजसो बालुवाटारमै हुन्छन् । तर नेता थापा भने रावलको भनाइको खण्डन गर्छन् । रावलले गलत प्रचार गर्दै हिँडेको उनको दाबी छ । मंगलबार बिहान एक सञ्चारमाध्यलाई अन्तर्वार्ता दिँदै थापाले पार्टीभित्रै रावल ‘बन्दुके कमरेड’ भनेर चिनिने र उनलाई कसैले पनि धम्की दिने नसक्ने बताएका छन् । उनको कुरा जस्ताको तस्तैः
भीम रावलजीले विषयलाई ट्वीस्ट गरेर आफ्नो सातु बिकाउन खोज्नुभएको हो । भीम रावलकै पार्टीको सरकार छ, उहाँ पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ । ३२ सालमा पर्चा सरेँ भन्नुहुन्थ्यो, त्यो समयमा पञ्चायत थियो पर्चा सर्नुभयो अहिले किन पर्चा सर्नुपरेको छ । अहिले अनेक किसिमको दुस्प्रचार गर्नुपरेको छैन । पञ्चायत विरुद्ध उहाँ लड्दापो पर्चा सर्नुभएको हो । लेखनाथले पिँजडाको सुगा लेखेँ भन्नुहुन्छ उहाँले पिँजडाको सुगा लेख्दा राणाशासन थियो । भीम रावलले अहिले राणातन्त्र ठान्नुभाको हो र उहाँले तथाकथित बालुवाटारमा धुँवाको मुस्लो लेख्नभो ?
हामीले मानसम्मान गरेकै नेता हो तर उहाँ किन यस्तो दृष्टिकोणमा चल्न खोज्नुभाको छ ? परिभाषित काममा सिमित हुनस् अर्काको कार्यक्षेत्र नमिच्नुस्, प्रचार विभागको काम तपाईंको होइन, तपाईं सुदुरपश्चिमको इञ्चार्ज हो भनेर मैले भन्दा कहिले बालुवाटारको जागिरे भन्नुहुन्छ, कहिले धम्की दिए भन्नुहुन्छ । उहाँले देशभक्ती राष्ट्रवादलाई पदप्राप्तिको लिस्नु बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । उहाँ मन्त्री हुँदा असाध्यै खुसी हुने, मन्त्री नहुँदा सधैँ यसो गरिरहने व्यक्तित्वको रुपमा चलिरहनुभएको छ । सरकारको कुनै विषय आयो भने सबैभन्दा बढी बालको खाल उतार्नेका रुपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभाको छ । कुनै पनि रचनात्मक काम छैन । एउटा पनि सरकारको कामको समर्थनमा बोलेको देखिनुहुन्न ।
उहाँको पछाडी धेरै मिडियाहरु लागेको देखेर मैले ‘राजकुमारी डायनलाई पापराजीहरुले निकै धेरै पछ्याएका थिए, तपाईंलाई आजभोलि त्यसरी नै पछ्याएका होलान्’ भनेको थिएँ । त्यसलाई उहाँले बङ्ग्याएर ज्यान मार्ने धम्की दियो भन्नुभयो, त्यसले उहाँ आफैँलाई हित गर्दैन । के भएको हो त, मानसिक रुपमा समस्या भएको हो की ? त्यसरी कसैले धम्की दिने कुरा त सोच्न पनि सकिँदैन । पार्टीभित्रकै छविको कुरा गर्ने हो भने ‘बन्दुके कमरेड’ भनेर त उहाँलाई चिनिन्छ नी ! कार्यविधि विपरितका सुरक्षा घेरा, अगुवा, पछुवा सेक्युरिटी कमिटी लिएर त उहाँ हिँडिरहनु भएको छ, उहाँलाई निहथ्या मानिसहरु कसले धम्की दिने ? सोच्न पनि नसकिने आपराधिक कुरा उहाँले किन गर्नुभयो ? यो चाँही एकदमै वाहियात कुरा हो ।
भीम रावलजीलाई कसले अनुसासनमा राख्ने ? उहाँलाई चित्त बुझेन भने आफ्नो पिएमार्फत के लेखाउनुहुन्छ, उहाँ आफू के भनिरहनुभएको छ । तपाईंको काम प्रचारविभागको प्रमुखले जस्तो पार्टीका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने भनेर रियाक्ट गरेपछि उहाँले प्रयोग गरेका शब्दहरुलाई हेर्न सकिन्छ । बामदेवलाई हराउन लागेको भन्नुहुन्छ । उहाँका अभिव्यक्ति र गतिविधिहरुले पछिल्लो समयमा भक्तपुर धरानको चुनाव हार्नमा भूमिका खेलेको छ । त्यस ढङ्गले उहाँले आफूले ऐनामा हेर्नुहुन्छ की हेर्नुहुन्न ? पार्टी, पार्टीको छवि र पार्टीले गरेका कामहरुलाई जनताको बीचमा लैजाने बारेमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम त सबैभन्दा बढी उहाँले गरिरहनु भएको छ ।